Igodo atọ iji dozie nsogbu teknụzụ dị oke mkpa | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 25, 2018 Tọzdee, Ọktoba 25, 2018 Justin Gray
Ọtụtụ mgbe, teknụzụ na-abụ mmadụ ịga nke ọma. Ami mmedue fi, kwa. Tech dị mfe ịzụta ma ya mere, ọ dị ka ngwangwa ozugbo! Afọ iri mbụ nke afọ 2000 bụ ihe na-abata, n'ihi ya, anyị gbara ọsọ gaa ngwa ngwa ahịa na-emeghe ogwe aka, na ntụ ntụ nke iwu ịzụta na ntuziaka ndị doro anya - anyị na-apụ ma na-agba ọsọ na usoro ọhụụ ọhụrụ anyị. Anyị na-ama ụra na ndị kpuru ìsì mgbe ọ bịara n'usoro n'ihi na atụmatụ yiri ka ọ na-adịghị ngwa ngwa; ọ bụghị sexy.
Marketingzụ ahịa na-aga ịnọ ọdụ na tebụl nkwụnye ego n'ụzọ ọ bụla dị mkpa - ọ bụ mkpu agha. Ma mgbe afọ gafere site na usoro ROI nke ekwere na nkwa abughi mgbe ọ bụla, mkpu ákwá ahụ ghọrọ ezigbo anya mmiri. Ọ dị mfe ịkwa ákwá maka Martech mgbe ị lere anya nloghachi ọ na - ewepụta - ihe na-erughị otu pasent nke ahia niile na - eduga ugbu a gaa ndị ahịa. Nke ahụ bụ ọdịda dị egwu. Ma ọ bụrụ na anyị edozighị maka ihe kpatara mgbaàmà a, ọrụ ịre ahịa nọ n'ihe egwu nke ikpochapụ ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tupu ọ malite.
Ọ dị oke mkpa na anyị ga-ebuso nsogbu a agha na isi ihe kpatara ya, ebe ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ nke ọma nwere ike ịgbanye ụta ahụ na ihe na-enyere aka ịzụta nke ngwanrọ, dịka mgbanwe na omume onye zụrụ ahịa. Naanị ezi mgbanwe kwesiri ime bụ ịre ahịa ahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa, ma nwee ihe ịga nke ọma na azụmaahịa, ị ga-enyerịrị echiche atọ na echiche siri ike maka akụkụ atọ na-achịkwa ihe ịga nke ọma: atụmatụ gị, teknụzụ gị, na usoro gị. Ha niile kwesiri ka ha kwekọọ, n'ofe osisi.
Yabụ, gịnị ka nke ahụ dị? Obi ụtọ ị jụrụ. Nke a bụ m were.
Strategy: Domino mbụ
N'agbanyeghị aha ọrụ gị, ịkwesịrị ịghọta atụmatụ kachasị nke nzukọ gị. N'okwu onye nkịtị, gịnị bụ ebumnuche kasịnụ nke azụmaahịa a? Ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, ndị ahịa ahịa… onye ọ bụla nọ na otu gị kwesịrị ịma azịza nke ajụjụ a dị oke mkpa. Okwesiri ibu ihe mbu mmadu nile matara, ghota ma lebara anya. Ọ bụrụ na akọwaghị nke a nke ọma, jụọ: Gịnị ka anyị na-anwa ime? Kedu ihe bụ isi ndị na - eto eto anyị? N'ụzọ ezi uche dị na ya, nzọụkwụ ọzọ na-agụnye ịghọta ihe ị nwere ike ịme kwa ụbọchị iji nyere aka mezuo usoro uto ahụ. Na nkenke, bụrụ mgbanwe ịchọrọ ịhụ na azụmaahịa a.
Nke a bụ ebumnuche abụọ:
Iji hụ na ị na-etinye oge gị n'ọrụ na ihe ndị dị mkpa.
Kwụsị ime ihe ọ bụla na-adịghị. Ọ na-ada ụda dị mfe, mana ọ ga-eju gị anya na mkpọtụ mkpọtụ dị n'ọtụtụ azụmaahịa n'ihi isi njikọ dị n'etiti atụmatụ na usoro. You'll ga-ahụ mgbanwe dị egwu mgbe ịmalitere ịrụ ọrụ site na ọnọdụ nke usoro mbụ. Kama ahịa inwe obi ụtọ banyere otu-apụ ọrụ, dị ka Bochum ihe omume, na mgbe na-agba ọsọ na ya na-enweghị doro anya ebumnobi na anya… ị kwusi. You'll ga-ajụ: Gịnị ka anyị na-achọ iji mezuo? Whonye ka anyị na-achọ itinye aka na ya? Gini kpatara ihe omume a kama ibu uzo ozo?
Anyị na-anụkarị gbasara azụmaahịa B2B na-agbaso usoro atụmatụ ndụ ndị ahịa oge niile, nke ha na-ezube ịba ụba ego na ntinye aka n'aka ndị ahịa dị ugbu a maka ịchọta ndị ọhụrụ. Eriri nke akwa nke nzukọ ha niile kwesịrị ịbụ ihe niile gbasara imebi ihe. Mgbe ị setịpụrụ atụmatụ gị, wee dezie ụzọ ụzọ kwekọrọ na mbido, ị ga-amalite ịkụtu ọbụna ihe mgbaru ọsọ gị kachasị elu karịa hel nke ọtụtụ ngwa ngwa karịa ka ị ga-eme.
Usoro: Otu esi esi mee Soseji
Mgbe atụmatụ ga-abịa igbu, na ìhè na-eduzi maka igbu bụ usoro a na-eche echiche nke ọma. Ọ bụrụ na atụmatụ gị gbasara uru ndụ ndị ahịa, dị ka ihe atụ m jiri n'elu, ị nwere ike ịdị na-elekwasị anya na laser maka nkwado ndị ahịa siri ike, na usoro mmepe akaụntụ. You'll ga-akụda ala otu esi azụ ahịa ndị ahịa gị dị na ọkwa niile nke ntozu okè, ma depụta otu ị ga - esi duzi ha site na njem ị bu n'uche maka ha.
Iji maa atụ, kedụ mgbe mmadụ zụtara ihe ngwọta gị - kedụ nke ọzọ? Nke a bụ ebe ị na-achọpụta etu ọkwa ọ bụla nke njem ndị ahịa gị dị. Ka anyi kwuo na onye ahia ya zutara Product X na uzo ozo na-enye nkuzi banyere otu esi eme ya nke oma. Mgbe nke a gachara, ị ga - azụziri onye ahịa maka ihe kpatara ha ga - eji chọọ ngwaahịa Y, yana ịkwadebe ha maka nzụta na mmejuputa ya. Mgbe ị na-esepụta usoro doro anya ma dozie otu gị gburugburu ya, ọ bụ atụmatụ gị nke na-achịkwa ya, onye ahịa gị ga-amata uru gị karịa. Nke a na-achọ ebumnuche na mkpebi siri ike ịnwe idobe usoro gị na mbu.
N'ikpeazụ - nchịkọta teknụzụ gị (amaara m, ị na-atụ anya na anyị ga-abanye n'akụkụ a). Nke mbụ, rịba ama na teknụzụ gị bịara nke atọ na akara a. Ọ ka bụ akụkụ nke ndị otu nrọ, mana ọ bụghị onye na-amalite ọkpụkpọ. Nke abuo, mata ya maka akuku o kwesiri igwu - a akwado ọrụ. Onwuka Ochuru, onye isi onye isi na Marketo ama ama kwuru na:
Onye nzuzu nwere ngwa ọrụ ka bụkwa onye nzuzu.
Aga m agakwu n'ihu ma na-arụ ụka na eziokwu ahụ dị njọ karịa, dị ka onye ahụ bụ ugbu a dị ize ndụ onye nzuzu.
Usoro na-adịghị mma, nke a kwụsịrị na atụmatụ ahụ, bụ ihe eji enyere ndụ aka maka ọdịda mgbe ị gbakwunye n'ọtụtụ na akpaaka nke teknụzụ. Ga-aga n'ihu na egwu, ngwa ngwa - ị ga-emebi akara gị. Eji etu usoro gị na usoro gị ga-esi mee nke ọma ga-esiwanye ike site na teknụzụ teknụzụ gị. Usoro gị kwesịrị ijide data gị, yabụ ị nwere ike nyochaa ya wee mee mkpebi amamihe dị na ya ma ị ga-anọ n'ụzọ ị na-aga ma ọ bụ na ị ga-eme ihe ziri ezi.
Iji mee ọrụ a, ịre ahịa chọrọ akara ngosi anya na nyiwe data ndị ọzọ. O zughi ezu maka ngalaba ọ bụla iji teknụzụ ya arụ ọrụ; ekwesịrị ịhazi ya n'ụzọ ka data ga-esi gafee ma gafee n'etiti ngalaba na ụzọ bara uru. Mgbe ị na-ahazi usoro gị iji mee ka usoro na usoro gị sikwuo ike, ị na-ebuli nzube ya elu. O nwere ike ọ gaghị adị ka ọkụ dị ka ime ka teknụzụ bụrụ kpakpando, mana ọ ga - enyere gị aka ịmekwu ihe ma nweta nsonaazụ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ n'amaghị ama na-elekwasị anya n'otu n'ime ihe atọ a ma hapụ ndị nke ọzọ abụọ ka ha jiri oji. Ma ọ bụ, nke ka njọ, ha na-anwa ijikwa ha atọ - mana na silos. Mgbe ọnọdụ abụọ ahụ na-ewere ọnọdụ, ndị otu gị anaghị edozi nke ọma. Kama nke ahụ, ịnwere ike ịme ka ego gị kwalite site na itinye ụzọ na mbụ, usoro na teknụzụ na - esote - na usoro ahụ yana akụkụ atọ nke otu, otu kwekọrọ. Nke a bụ ebe dị ụtọ, yana ebe ị ga - ahụ ihe ịga nke ọma na - enwe ọganihu.
Tags: jill rowleyigbu ahiausoro ahiamarketing atụmatụteknụzụ ahịaahịankatamartech tojupụtaraTechnology
Justin Gray bụ serial entrepreneur na onye isi na onye guzobere ya LeadDD, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na-enweta ego n'ụwa niile, ebe mejuputara ihe karịrị ọkara nke ndị ọrụ Marketo. Justin arụ ọrụ nke ịmalite ụlọ ọrụ na-aga nke ọma ma na-ele ha anya, yana ụzọ ọpụpụ nke ọma karịa 200MM + n'ime afọ iri gara aga. Justin gbalịsiri ike ịmalite n'afọ 2016 mgbe ọ malitere ntọala Brik isii, Ihe omumu nke ntaneti nke edoziri iji merie ndi oru na ndi ahia site na omuma ihe omumu. N'ime afọ 10 gara aga, Justin apụtawo dị ka olu siri ike maka ọchụnta ego, azụmaahịa na ọdịbendị. Dị ka ọkà okwu a ma ama, Justin ebipụtala ihe karịrị oge 350 na mbipụta ụlọ ọrụ ma jide kọlụm nke ya, Tribal Knowledge, na Inc., ebe ọ na-edekwa maka ndị ọchụnta ego, Tech Crunch na ndị ọzọ. Justin na nwunye ya Jennifer zutere banyere ahịa na afọ atọ ka e mesịrị nabata nwa ha nwoke, Grayson, n'ime ụwa na Eprel nke 2017.